(၃) ပေနီးပါး ထပ်မံ မြင့်တက်လာတယ် ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး တောင်ဖြစ်တဲ့ ဧဝရက်တောင်ကြီး – Shwe Naung
(၃) ပေနီးပါး ထပ်မံ မြင့်တက်လာတယ် ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး တောင်ဖြစ်တဲ့ ဧဝရက်တောင်ကြီး
Shwe Thuta | December 13, 2020 | Knowledge | No Comments
ကမ္ဘာ့အမြ င့်ဆုံးတော င်ဖြစ်တဲ့ ဧဝရက်ေ တာင်ရဲ့ အမြင့်ကို ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှာ အိန္ဒိယနို င်ငံက ပထဝီဝင်သင် ရိုးထဲမှာ (၈၈၄၈) မီတာလို့ သတ်မှတ်ဖော်ပြခဲ့တာကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက လက်ခံသုံးစွဲ ခဲ့ကြပေမဲ့ ဒီနေ့ကစပြီး အဲဒီအြ မင့်စံနှုန်းဟာ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဧဝရတ်တော င်ထွ တ်အမြင့်ဟာ အခုနောက်ပိုင်း ပြောင်းလဲ နိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်ချက်တွေ ရှိတဲ့ အတွက် နီပေါနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတို့က ပူးပေါင်းတိုင်းတာပြီး တောင်ထွတ်ရဲ့ အမြင့်က (၈၆) စင်တီမီတာ သုံးပေနီးပါး မြင့်တက်နေတာကို တွေ့ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုြ မင့်တ က်လာတာဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က လှုပ်ခတ်သွားတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ငလျင်ကိုလည်း အကြောင်းတစ်ခုအဖြစ် ထည့်သွင်း စဉ်းစာခဲ့ကြပါတယ်။
ငလျင် လှုပ်ရှားမူနဲ့ ကျောက်လွှာ ချပ်တွေ ရွေ့လျားမှုကြောင့် အခုလို အမြင့်ပေ တက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး (၆၆) နှစ်တာအတွင်းမှာ သုံးပေနီးပါး၊ နှစ်နှစ်ကြာတိုင်း တစ်လက်မ မြင့်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ (၈) ရက်နေ့မှာ နီပေါနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတို့ ပူးပေါင်းတို င်းတာမှုကို သတင်းထုတ်ပြန် ရာမှာတော့ ဧဝရတ်တောင်ထွတ် အမြင့်ဟာ အရင်က ထုတ်ပြန်ထားတာ ထက် (၈၆) စင်တီမီတာ ပိုမြင့်မားလာပြီး (၈၈၄၈. ၈၅) မီတာမြင့်တယ်လို့ နီပေါနိုင် ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒရာဒိပ်ဂွါဝါလီက ခတ္တမန်ဒူမှာလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်:ပွဲမှာ အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ဆင်ဟွာသတ င်းဋ္ဌာနကလည်း ဒီတိုင်း တာမှုအသစ်ကို အတည်ပြု ထုတ်ြ ပန်သွားပါတယ်။ အစောပိုင်းက တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုင်းတာချက်မှာ တောင်ထွတ်အမြင့်က (၈၈၄၄ .၄၃) မီတာလို့ ဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့ နောက်ဆုံးတိုင်းတာမှုမှာတော့ အတည်ပြုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမာၻ႔အျမ င့္ဆုံးေတာ င္ျဖစ္တဲ့ ဧ၀ရက္ေ တာင္ရဲ႕ အျမင့္ကို ၁၉၅၄ ခုႏွစ္မွာ အိႏၵိယနို င္ငံက ပထဝီဝင္သင္ ရိုးထဲမွာ (၈၈၄၈) မီတာလို႔ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခဲ့တာကို တစ္ကမာၻလုံးက လက္ခံသုံးစြဲ ခဲ့ၾကေပမဲ့ ဒီေန႕ကစၿပီး အဲဒီအျ မင့္စံႏႈန္းဟာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ဧ၀ရတ္ေတာ င္ထြ တ္အျမင့္ဟာ အခုေနာက္ပိုင္း ေျပာင္းလဲ နိုင္တယ္လို႔ သုံးသပ္ခ်က္ေတြ ရွိတဲ့ အတြက္ နီေပါနဲ႕ တ႐ုတ္နိုင္ငံတို႔က ပူးေပါင္းတိုင္းတာၿပီး ေတာင္ထြတ္ရဲ႕ အျမင့္က (၈၆) စင္တီမီတာ သုံးေပနီးပါး ျမင့္တက္ေနတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုျ မင့္တ က္လာတာဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က လႈပ္ခတ္သြားတဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ ငလ်င္ကိုလည္း အေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္း စဥ္းစာခဲ့ၾကပါတယ္။
ငလ်င္ လႈပ္ရွားမူနဲ႕ ေက်ာက္လႊာ ခ်ပ္ေတြ ေ႐ြ႕လ်ားမႈေၾကာင့္ အခုလို အျမင့္ေပ တက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး (၆၆) ႏွစ္တာအတြင္းမွာ သုံးေပနီးပါး၊ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာတိုင္း တစ္လက္မ ျမင့္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီဇင္ဘာ (၈) ရက္ေန႕မွာ နီေပါနဲ႕ တ႐ုတ္နိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္းတို င္းတာမႈကို သတင္းထုတ္ျပန္ ရာမွာေတာ့ ဧ၀ရတ္ေတာင္ထြတ္ အျမင့္ဟာ အရင္က ထုတ္ျပန္ထားတာ ထက္ (၈၆) စင္တီမီတာ ပိုျမင့္မားလာၿပီး (၈၈၄၈. ၈၅) မီတာျမင့္တယ္လို႔ နီေပါနိုင္ ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဒရာဒိပ္ဂြါဝါလီက ခတၱမန္ဒူမွာလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္:ပြဲမွာ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
တ႐ုတ္နိုင္ငံပိုင္ ဆင္ဟြာသတ င္း႒ာနကလည္း ဒီတိုင္း တာမႈအသစ္ကို အတည္ျပဳ ထုတ္ျ ပန္သြားပါတယ္။ အေစာပိုင္းက တ႐ုတ္နိုင္ငံရဲ႕တိုင္းတာခ်က္မွာ ေတာင္ထြတ္အျမင့္က (၈၈၄၄ .၄၃) မီတာလို႔ ေဖာ္ျပခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ဆုံးတိုင္းတာမႈမွာေတာ့ အတည္ျပဳလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ချစ်ပရိသတ် ကြီးရေ လူမှုကွန်ယက် ကနေ ပျောက်ခြင်း မလှ ပျောက်သွားပြီး အခုမှ စာလေး တစ်ကြောင်းနဲ့ ပြန်ထွက် လာတဲ့ ယွန်းယွန်း………..
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဂုဏ်ရှိန်မြင့်စေခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစေခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး (၃)ဦးရဲ့အကြောင်း
တိမ်မြုပ်နေတတ်တဲ့ ကိုယ့် ရဲ့ ဝါသနာကို ဘယ်လိုရှာဖွေ တူးစွနိုင်မလဲ…
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ည ၁၂ နာရီတိတိ မှာ ပံ့သကူပစ်ပါ…ဘာကြောင့်လဲ